Maalinta: 26-ka July, 2017
Tunisiga Eurasia, oo isku xira Aasiya iyo Yurub markii ugu horreysay oo leh tunto laba dabaq ah oo dabaq ah oo kuyaalla dabaqa badda, ayaa bixiya adeegyo deg deg ah, gaadiid, badbaado, raaxo leh iyo adeegyo gaadiid oo deegaanka u dhexeeya labada qaaradood. [More ...]
Eeyuhu waxay la safri karaan laydhka laydhka ee magaalada Istanbul
BB Istanbul City Lines waxay siisaa shimbirta, bisada, bakaylaha qafiska ee hoolka rakaabka, eeyaha waxay awoodi doonaan inay ku safraan banaanka hoolka rakaabka iyagoo xiraya af-ka hadalka. Dadka degan Magaalada Istanbul ayaa markale go’aamiyay shuruudaha gaadiidka xoolaha. Weyn Istanbul [More ...]
ASELSAN, oo waa bixiyaha ugu weyn ee Turkiga difaaca korantada, habaynayso koboc dhaqaale oo la qiimo abuurka ee suuqyada caalamiga ah. Shirkaddu hadda waa xalka ugu muhiimsan ee qaybta si dhaqso leh u kobcaya waaxda nidaamyada tareenka dhulka. [More ...]
Tan iyo 2003, maalgalin cusub oo xagjir ah iyo dib u habeyn ayaa la bilaabay. Qaab-dhismeedkan dhexdiisa, abuuritaanka xarun cilmi-baaris iyo kobcinta kobcinta waaxyada, u gudbinta hal-abuurka waaxda lana kulmaysa baahiyaha R&D [More ...]
Nabadgelyada iyo tayada qaybta jidka tareenka
Shirkadaha caalamiga ee tareenka maanta waxay muhiimad weyn siinayaan amniga iyo heerarka tayada ee tikniyoolajiyadda tareenka. Heerarka caalamiga ah ee laxiriira ayaa si joogto ah dib loogu cusbooneysiiyaa raaxo, tayo iyo badbaado, iyadoo la raacayo tikniyoolajiyadda isla markaana ay kordhineyso xawaaraha socdaalka [More ...]
Mashruuca Xarunta Cilmi-baarista iyo Xarunta Daraasada Qaranka ee Jaamacadda Anadolu (URAYSİM)
ujeeddooyinka Our istiraatiiji u ah xadiidka tareenka ee Turkey Gaadiidka iyo Strategy Isgaarsiinta; Faydalan Adeegsiga horumarka tikniyoolajiyada, sameynta shabakad tareen oo ballaaran oo la jaan qaada noocyada kale ee gaadiidka; dhaqaaluhu waa xoogga kicinaya horumarka dalka, [More ...]
Diiwaangelinta ganacsiga ee CGM
Agaasinka Guud ee Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara ee EGO ayaa diiwaan gelisay codsigeeda markay ahayd EGO CEP sağlayan astaan ​​ahaan, kaas oo si deg deg ah uhelaya macluumaadka gaadiidka ee muwaadiniinta adeegsanaya basaska EGO ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada iyada oo loo marayo telefoonada smart. General EGO [More ...]
Shuruudaha deegaanku waxay qayb ka qaateen qaybta tareenada
Turkey Tareennada ee kaabayaasha xadiidka ee horumarka ah ee technology iyo qalabka si ay u taageeraan wax soo saarka ee gaadiidka tareenada by saarka maxalliga ah, laakiin tiro yar oo ah warshadaha ee tareenka badan oo horumarsan [More ...]
Tallaabooyinka waaweyn ee gaadiidka tareenada
Ururka gaadiidka tareenada (DTD) ayaa lagu aasaasay 2006 si loo horumariyo nooca cagaaran ee nadiifka ah ee gaadiidka tareenka sida waafaqsan shuruudaha waddanka iyo waddanka iyo in la kordhiyo saamiyada wadada ee wadada gaadiidka guud. [More ...]
Ilaa sanadka 2023, baahida guud ee gaadiidka magaalada waa gawaarida la cusboonaysiin karo oo ay ku jiraan metro, LRT, tram iyo trambus. Qiyaasta qiimaha waa 7.000 bilyan euro. Is dhexgalka iyo Is dhexgalka [More ...]
Shaqada kooxdu waxay soo saartay nidaamka gaadiidka tareenada qaranka
Nidaamka Gaadiidka Gawaarida Anadolu ee hadafkiisu yahay in la soo saaro nidaamyada gaadiidka xadiidka tareenka gudaha iyo qarankaba laga soo bilaabo qaabeynta ilaa alaabada ugu dambeysa iyo in laga dhigo summaddeena qaran ee wax soo saarta sida magacyada tartan ee adduunka. [More ...]
Ogeysiiska Sarkaalka Ballanta ee loogu talagay dadka dagan TÜLOMSAŞ
qandaraaslaha (Turkey tareenka iyo Engine Industry Co., Ltd.) oo ay xaq u Agaasinka Guud KPSS 2017 / 1 lagu magacaabayo dhawaaqay daabacay musharixiinta sarkaalka. Dukumiintiyada la codsaday waa la shaaciyey. qandaraaslaha (Turkey tareenka iyo Engine Industry [More ...]
Ka saar booyadaha gaar-ahaaneed ee ku yaal Bursa ee Metrosun
Nabadgelyada bulshada laguma gaari karo kala saarid, laakiin iyada oo la xaqiijinayo amniga iyo cunaqabataynta qaybaha ay quseyso. Baabuurrada 1 waxaa loo habeeyay haweenka aan lagu arkin wax casri ah oo bulshada ah, iyo codsigii ugu dambeeyay ee wagon wuxuu hubiyaa haweenka. [More ...]
Konak Tram waxay la kulmeysaa saldhigga Alsancak Station
Wadada tareenka, oo ay hirgaliso degmada İzmir ee Magaalo Weyn iyada oo ujeedkeedu yahay bii'ada, dhaqaalaha iyo gaadiidka magaalada oo raaxo leh, ayaa galaya waji kale oo adag oo ku aadan khadka Konak. Saldhigga tareenka ee Alsancak wuxuu gaarayaa gobolka sababtoo ah khadka soosaarka ee nidaamka wadooyinka [More ...]